Ku'saabsan | December 2019
Qurxoon, casaan ama cagaaran, aad u taajir ah, miraha dhirta sonkorta ayaa muddo dheer loo arkaa mid ka mid ah midhaha ugu jecel. Pear wuxuu keenaa dareen ah jahwareer, sambabkiisa sonkortu wuxuu ku dhalaalaa afkaaga. Noocyo badan oo pear ah ayaa loo yaqaan, laakiin mid ka mid ah noocyada ugu jecel yahay nooc ka mid ah pear pear ah Maanta waxaan ka wada hadli doonaa waxyaabaha gaarka ah ee sii kordhaya kala duwan, oo ku saabsan wax kasta oo la xiriira daryeelka ee Lada kala duwan.
Dhammaan dalagyada miraha waxay ku dhacaan weerarrada cayayaanka, iyo isteroberi ma aha mid ka reeban. Ha qaadan wax macquul ah si aad u ilaaliso geedaha ugu yaraan si taxadar la'aan ah, maadaama ay taasi keeni karto oo kaliya dhimashada dalagga, laakiin geedka oo dhan. Xaaladdan oo kale, bannaanka soo dhaweynta aad ayuu uga walwalsan yahay su'aasha: "Waa maxay cayayaanka khatarta ah iyo macneheedu waa in la isticmaalo si loo ilaaliyo cayayaanka pear weligiis geed ka baxaya?"
Noocyo ku'saabsan "Nika": habka saxda ah iyo sifooyinka daryeelka
Miraha khudradda quruxda badani waxay keenaysaa dareen degdeg ah oo ay ku farxaan dhadhanka wanaagsan iyo dhadhanka macaan. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa noocyada kala duwan ee pears "Nika", dheeraad ah oo ku saabsan kaas oo aan ka wada hadli doonaa qodobkan. Sharaxaada pear fasalka "Nika" Wajiga geedka ee kala duwan "Nika" waa celcelis, qiimaha kobaca waa lafdhabarta.
Bisaylkiisa isbeddelka beerta ayaa tilmaamaya dhammaadka xagaaga. Waxaad ku keydsan kartaa gabal ah adoo diyaarinaya miro kulaylka ah jiilaalka. Caano, jamsi, marmalades, waxsoosaarka, sharoobada iyo miraha la isku qurxiyo, iyo sidoo kale macmacaanka la sameynaayo, waxay iftiiminayaan maalmaha qaboobaha iyo habeenkii qabooba. Cunniin jilicsan oo la gooyey Cunnooyin loogu talagalay buro pear ah ee jiilaalka waa kala duwanyihiin, oo ku dhowaad dhammaantood waa la diyaariyaa iyada oo aan la isticmaalin nidaam sterilization ah.
Miro waa miro aad u fiican oo caafimaad leh oo aan loo isticmaali karin oo keliya qaabka dabiiciga ah ama qaabka saxaraha, jamarka, marmalades, miro la jarjaray, iwm, laakiin sidoo kale waa qayb ka mid ah dhadhanka cusub ee macmacaanka iyo saladaha, maraqa iyo aasaasiga hilibka iyo kalluunka. Noocyada qaar ka mid ah isteroberi ayaa si fiican loo hayn karaa ilaa qabow, laakiin su'aasha ah sida si haboon u goosan isteroberyo qaboobaha ayaa weli ahmiyad gaar ah u leh hooyooyinka intooda badan.
Kalluunka "Elena": Fikradaha iyo qasaarooyinka kala duwan, beerashada iyo daryeelka
Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, pear wuxuu ahaa geedkii caanaha ugu caansanaa. Maqaalkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad ku beerato pear ah noocyada kala duwan ee "Elena" iyada oo aan wax dhibaato ah oo ku raaxeeyso midhihiisa dhadhan fiican leh. Noocyada caanka ah ee kala duwan ee "Elena" Pear "Elena" waa noocyo hore ee jiilaalka. Tani waa geed miro gaaban oo leh taajkii barxadda.
Pear waxaa la beeray in ka badan saddex kun oo sano. Duurjoogta, waxay u koreysaa Eurasia ilaa 60 darajo waqooyiga woqooyi. Cilmi-baadhayaashu waxay aqoonsadeen laba xarumood oo qadiimiga ah ee domesiyada duurjoogta ah - Shiinaha iyo Aasiyada Aasiyada yar, laakiin meesha ugu horaysay ee loo beeray lama ogayn. Dhaqdhaqaaqa nadiifka ah iyo guryaha caafimaadka leh ayaa ka samaysan mid ka mid ah miraha ugu jecel (waxaa jira in ka badan 5000 oo noocyo kala duwan ah).
La kulan pear noocyo Kokinskaya
Pear waa caan ah ee bannaanka u sababtoo ah dhadhanka dhirta dhadhan fiican leh iyo casiir, unpretentiousness ee beerista iyo noocyo kala duwan. Maanta waxaa jira xulasho ballaaran oo kala duwan ee muddooyinka Bisaylkiisa kala duwan kuwaas oo u adkeysanaya cudurada iyo xaaladaha cimilada - iska caabin barafo, muddooyinka qalalan. On mid ka mid ah noocyo of isteroberi - Kokinsoy hadal ee maqaalkan.
Noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'pear pear': sharaxaad, astaamaha beeraha iyo daryeelka
Kiimiko, inta badan, waa dhirta aan qabin ee aan u baahnayn daryeel gaar ah ama xaalado sii kordhaya. Thanks to beeraleyda, bannaanka casriga ah ayaa fursad u leh inay dib u soo celiyaan ururadooda geedo waaweyn oo leh noocyada ugu wanaagsan ee ku habboon beerashada xaaladaha cimilada ee kala duwan. Taariikhda noocyada taranta ee isteroberi "Rogneda" Miscelin isdabajoog ah "Rogneda" - midhaha shaqada ee dhaqanka Ruushka.
Waxaa ka mid ah noocyada xagaaga ee isteroberi, The pear Nursery waxaa loo tixgeliyaa ugu horreyn, taas oo sidoo kale waa xusuusin leh gaar ahaan dhadhanka macaan iyo dhalidda wanaagsan. Sababtan awgeed, waxaan hoos ku eegeynaa faahfaahinta sifooyinka kor u qaadaya jardiinooyinka xanaanada, sidaa daraadeed ninkii beerta oo idil wuxuu qurxin karaa goobtiisa. Taariikhda abuuritaanka pear kala duwan Carruurta Ilmaha ugu horreeya ee pear kala duwan Carruurta waxaa laga helay xannaanadda All-Ruush ee magaalada Moscow, halkaas oo tarbiyeyaasha Y. ka shaqeeyey.
Talooyinka ugu wanaagsan iyo talooyinka ah ee noocyada pear soo kordhaya Augustus dhoobo ah
Maanta, tiro badan oo kala duwan oo isteroberi ah ayaa la dhigay bred, meel sharaf leh taas oo ay ku qabsadeen dhoobada August. Waxay ku dhacday jacayl leh bannaanka u for unpretentiousness iyo goosashada deeqsi ah. Maxaa kale oo ah muusiko macaan ee Augustus dhirta, iyo sidoo kale waxa sharaxaadiisa iyo shuruudaha aasaasiga ah ee daryeelka, waxaan hoos ku qeexnaa. Pear Avgustovskaya dhoobo: sharaxaadda noocyada kala duwan ee Avgustovskaya dheeh ayaa la soo shubay 2002 iyadoo la kala goynayo noocyo Dareenka iyo Triumph Pakgam by breeder caan.
Cajiibyo kala duwan Isdhaafka Jegalow: Faa'iidooyinka iyo khasaaraha, gaar ahaan beerto iyo daryeel
Kiimiko - aad u dhadhan fiican leh, iyo sidoo kale miro aad u caafimaad leh. Laga soo bilaabo tufaax tufaax ah oo caan ka badan waxay kala saaraa dhadhan macaan iyo caraf udgoon. Badanaa jardiinooyinka iyo agagaarka magaalooyinka ku yaala waxaa jira geedo tufaax ah oo ka badan geedaha pear. Waxaa laga yaabaa in tani ay sabab u tahay noocyo kala duwan oo kala duwan oo kala duwan ee pear. Sida caadiga ah, dhammaan noocyada noocaas ah waa wax yar oo isku mid ah.
Xeerarka guud iyo talooyinka soo saaridda isteroberi ee guga
Goobidda waa marxaladda ugu muhiimsan ee beerashada pear. Haddii la soo saaray si khaldan, ka dib goosashada wanaagsan wuxuu u qabsoomi doonaa muddo dheer, ama, si aad u macquul ah, waxaad filan kartaa wax goosan ah oo dhan. Sida loo doorto waqtiga loo beerayo? Sidaas, su'aasha koowaad waxay u dhacdaa ninkii beerta ka shaqaynayay oo doonaya inuu dhirta gooyo: goorma ayay ka fiican tahay in la gooyo pear guga?
Inta badan, bannaanka u soo baxaan cuduro kala duwan iyo cayayaanka. Mid ka mid ah waa caarada caarada leh, iyo sida loola macaamilo, waxaan ku sheegi doonaa maqaalkan. Sidee ayuu "cadowga" u egyahay? Cayayaanka ayaa leh cabbir aad u yar - dhererka qof weyn oo qiyaas ahaan waa 0.18 mm. Cayayaanka waxay leeyihiin midab cad, taas oo ay la imaanayaan xilliga dayrta waxaa lagu bedelayaa casaan ama midab khafiif ah.
Sida loo takhaluso Baalallaha on pears
Mid ka mid ah cayayaanka ugu khatarta ah ee bannaanka u kulma marka koraya geedaha pear waa aboor ku cayayaanka. Cayayaanka Tani waxay awood u leeyihiin in ay ku dhufanaa dhammaanba dusha sare ee warshadda waqti gaaban. Goob-guntan wuxuu u baahan yahay wax-tar ah, isla markiiba iyo, ugu muhiimsan, hababka dalagga ee ammaanka ah ee wax ka qabashada.
Sida loo abuuro pear guga: talaabo talaabo talaabo ah
La qabsashada patch patch waa farsamaynta beerta ee xiisaha leh, iyada oo caawimaad ah oo aad kala duwanaan karto beertaada iyo cuntadaada, waxaad fursad u helaysaa inaad ka saarto miraha varietal ee pear caadi ah ama geedo kale. Ugu danbeyntii, waxaa laga yaabaa in ay tahay mid xiiso leh in la isku daydo wax cusub. Sababaha ayaa laga yaabaa inay ka duwan yihiin, laakiin ma dhaawacaan si ay u bartaan aragti, ka hor inta ay bilaabaan shaqeynta xiiso leh ee jilciya - tallaalka.
Waxaan baraneynaa pear fasalka "Krasulya"
"Krasulya" waa noocyo kala duwan oo xagaaga ah, caan ah oo loo jecel yahay beeralayda dhadhanka miraha iyo aan qabyo ahayn beerashada. Thanks to hardiness jiilaalka, pear waxaa laga abuuri karaa gobollada leh jawi qabow. Taariikhda noocyada taranta ee pears "Krasulya" isteroberi "Krasulya" - wax soo saarka shaqada taranta ee aqoonyahanka ee Machadka Scientific-Research ee Koonfurta Ural-cilmi-baarista ee dhirta iyo dhirta,
Ku'saabsan "Petrovskaya": sharaxaad, beeritaanka iyo daryeelka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada kala duwan
Noocyada kala duwan ee xagaaga ee "Petrovskaya" waxaa la soo saaray 1959 iyada oo laga soo gooyay Beelaha. Geedku wuxuu leeyahay dherer celcelis iyo dhumucda taajka, jilifku waa mid bunni ah oo siman. Laanta ugu muhiimsan waxay ku taallaa jirridda ku dhawaad ​​xagal quman. Laamaha qallafsan, qaabkoodu waa naadir, kor iyo sare. Noocyada miraha - nooc isku dhafan.
Sida loo takhaluso qolofta on pear
Pear waa geed geed qurux badan oo noqon kara muujinta beertii kasta. Laakiin waxa la sameeyaa marka qof walba oo geedka loo jecel yahay uu si lama filaan ah ku dhufto qolof? Waa maxay khatarta iyo xagjirnimada meesha ay ka timaaddo - cudur fangas ah oo badanaa laga helo geedaha cimilada dabiiciga ah. Wakiilka keena cudurku waa musqusha marsupia Venturia pirina.